Musikana wese anozvarwa ane matinji - Vamwe vanodhonza kabhinzi! - Masasi eHarare
Ask Tete Molly Musikana wese anozvarwa ane matinji – Vamwe vanodhonza kabhinzi!
Matinji agara aripo pamukadzi wese asi madiki saka zvichinzi dhonzayi Matinji akure kana kureba. Musikana wese anozvarwa ane matinji but nekukura kwevakadzi muviri inosiyana Uye zvinodawo kunzwisiswa kana munhu wanzi dhonzayi Matinji usati Tete kana Ambuya vanopenga nekuti vanoitira iwewe Mukadzi kunyanya.
Matinji tinoziva kuti kune mamwe marudzi vanoita zvekumanikidza vasikana kudhonza, avo chokwadi vakakomborerwa nekuti vanoitwa inspection kuona kuti vari kudhonza matinji kana muromo webeche. Vamwe vanodhonza makongo kabhinzi vachiti ndiro dinji, nekuti vanenge vangoudzwa kuti dhonzayi vasina kuratidzwa kuti aya ndomatinji.
Matinji anobatsirawo kuitwa mipendero yembutu kuisawo mukati seganda remboro unogona kurivharisa mboro pabonde kudzivirira kurwadzisana mukadzi kana ane dambudziko rekunonoka kutotota kana achikasika kuwoma muchisvirana f0reskin inobatsirawo mukadzi kuti aregerewo kusvuuka. Izvi zvef0reskin ndiri kutaurirawo varume vanoziva zvekuita kana mukadzi ati zviri kurwadza, ndivo vanogadzirisawo ganda reMboro yavo kuti pabonde varege kurwadzisana.
Mukadzi anenge adhonza Matinji chiziva kuti Matinji anodawo kuita semboro iri mubhurugwa. Matinji anogona kushaisa mukadzi mufaro achifamba nekuti anogona kungobuda muthong kana mug-string usingafungire. Madzimai matinji anobatsirawo imi kunyanya panoitwa bonde, varume vanongodawo zvekubata chete asi kutaura chokwadi matinji anobatsira iwe muridzi. Ukanzwa munhu anoti beche ibeche mumwe kunyaradzana nevamwe asi chokwadi tiri kudawo kubatsira vanoda matinji coz matinji ndivo zvekare anonzi Chibwezela, ChilandilaMbolo kureva kuti mudzoranyini hakuna mushonga unokunda matinji kudzora Beche Hakuna MUSHONGA unokunda Matinji kuti Beche ridziye.